Filoha Rajaonarimampianina : Akaikin’ny madinika -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina : Akaikin’ny madinika
03/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nifarana teo amin’ireo tsy manan-kialofana ny asan’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ho an’iny taona 2017 iny. Ny 30 desambra 2017 lasa teo, tokony ho tamin’ny 9ora alina tany ho any, dia nidina nijery manokana ireo tsy manan-kialofana teto an-drenivohitra ny tenany sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, nizara sakafo ho an’ireo olona mahantra, izay miisa 350 any ho any. Nisitraka izany, ireo teny ambany Tunnel Ambohidahy sy Tunnel Ambanidia, Behoririka, Anosy, Antaninarenina ary ireo teny amin’ny “Centre d’hébergement de nuit” eny Isotry. Fihetsika efa fanaon’ny Filoha isan-taona moa izy ity fa niavaka kosa izany tamin’iny faran’ny taona 2017 iny, mba hipaka eny amin’ny vahoaka malagasy ny asa sosialy izay ataony, izay manaporofo ihany koa fa manakaiky ny vahoaka ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. “Tsotra fotsiny ny antony, rehefa tonga ny 30 desambra tahaka izao, dia miteny amin’ny vahoaka malagasy aho. Fa amin’ity indray mitoraka ity, tsy ao anaty trano na an-dapa fa omena endrika manokana, ka eto dia maneho ny fiarahabana amin’ny vahoaka malagasy isan-tokantrano, isam-batan’olona nahatratra ny faran’ny taona 2017. Miarahaba tsy maty fo aman’aina. Betsaka ny zavatra nolalovana tamin’ny 2017, tao ny mahafinaritra, tao ny mahafaly fa teo ihany koa ny manahirana, tao ny fahasahiranana, tao ny fitsapana maro samihafa izay miseho amin’ny maha olombelona, ny fiarahamonina, teo amin’ny firenena, kanefa zava-dehibe ny ahatratrarana izao faran’ny taona izao”, hoy ny Filoha Rajaonarimampianina teny Isotry, niarahaba ny vahoaka malagasy tratran’ny faran’ny taona 2017.
“Tsy vitany hoe tiako aseho amin’ny teny fotsiny izany fa amin’ity androany ity (30 desambra), izay tsy fanao isan-taona dia amin’ny alalan’ny asa entina hampandrosoana ny firenena, hifanakaikezana amin’ny vahoaka, ary ny fijerena ny tena tombontsoan’ny vahoaka malagasy rehetra. Satria mipaka amin’ny vahoaka malagasy iray manontolo ny fon’ny Filoha, ka dia miarahaba antsika rehetra tratran’ny faran’ny taona, ary dia ho tratran’ny taona vaovao 2018. Samia ho tahian’Andriamanitra tompoko”, hoy hatrany ny Filoha niarahaba ny vahoaka. Manoloana ny fahasahiranana iainan’ireo tsy manan-kialofana kosa indray, dia nilaza ny Filoha teny amin’ny Tunnel Ambohidahy fa hojerena manokana ny toerana hametrahana azy ireo. “Fantatro ny fahasahiranana iainanareo, tsy mora izany ka hojerena manokana ny momba anareo, ary izany indrindra no hiadiana isan’andro hampandrosoana ny firenena. Tsy vita indray andro izany fa miezaka isika hanatanteraka ny fampandrosoana. Mila faharetana kely, fa mahatsiaro antsika amin’ity faran’ny taona ity dia mirary ny soa sy ny tsara rehetra ho antsika”, hoy ny Filoha Rajaonarimampianina teny amin’ny Tunnel Ambohidahy. Nandritra ny fidinana iny hatrany, nisy ireo naniry hody any an-tanindrazana amin’izao fankalazana taom-baovao izao, ka nanararaotra ny Filoha, nangataka saran-dalana, hamonjy an’i Maintirano, ka noraisin’ny Filoham-pirenena an-tanana izany.
Taorian’ny hetsika natao teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ny sabotsy lasa teo, dia nanao fanambarana ny vondron-tafika , izay ahitana ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ary ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena omaly teny amin’ny ...Tohiny